🍒I-Casino ye-FastPay-indawo esemthethweni, ubhaliso, iibhonasi 2021
Malunga neNkampani yeFastPay
FastPay Casino >I-FastPay kwiCasino ekwi-Intanethi-Eyona ndawo ilungileyo yokuHlawula kunye nokuHlawula ngokuKhawulezayo kwindawo enye
I-FastPay kwiCasino ekwi-Intanethi-Eyona ndawo ilungileyo yokuHlawula kunye nokuHlawula ngokuKhawulezayo kwindawo enye
Uphengululo lweWebhusayithi eliSebenzayo oluKhawulezayo
Intengiselwano yezemali kwikhasino yeFastPay
Ukwahluka koomatshini ekufakwa kwi-FastPay
Iibhonasi kunye nentengiso yokukhuthaza abathengi be-FastPay
IKhasino ekwi-Intanethi FastPay yiprojekthi yolutsha yokungcakaza eyaziswa nguDama N.V. Amakhasino amaninzi awaziwayo asebenza phantsi kolawulo lwakhe. UFastPay unelayisensi yamanye amazwe ekhutshwe yiKhomishini yeMidlalo yeCuracao. I-casino ekhompyutheni ihlolwa rhoqo ukunyaniseka kwaye isebenzisa kuphela i-slot machines. Iprojekthi ijolise kwinkonzo esemgangathweni kunye neentlawulo ezikhawulezayo.
Eyona ndawo iphambili yekhasino ikummandla we-COM wommandla. Amanye amazwe afuna iiprojekthi zokungcakaza zamazwe aphesheya ukuze zifumane ilayisensi yendawo, kungenjalo iisayithi zazo ziyavalwa. Ukugqithisa izithintelo, kukho isipili se-FastPay-esi sisiza esongezelelweyo esingafaniyo nesona siphambili ekusebenzeni nakwindlela yokujongana. Umahluko kuphela yidomeyini.
Indawo ekhawulezayo yokuHlawula yenziwe ngemibala emnyama. Kuphela ngamaqhosha kunye nemidlalo enoyilo oluqaqambileyo. Imenyu ephezulu imelwe ziithebhu:
"Malunga nathi" - iqulethe ulwazi malunga nekhasino;
"Inkxaso" - ikuvumela ukuba ushiye isicelo kwinkonzo yenkxaso;
"Iintlawulo" - iinkqubo zokuhlawula ezixhaswayo, imida yedipozithi kunye nokurhoxa kubonisiwe apha;
"Promo" - icandelo linikezelwe ngolwazi malunga nokukhushulwa kwangoku, iibhonasi, iimeko zokufumana kwabo;
"Iitonamenti" -ikhasino ibamba iitumente rhoqo phakathi kwabathengi bayo, kwicandelo unokufumana ulwazi malunga neetumente zangoku nezexesha elizayo.
Phezulu kukho ifom yokungena, iqhosha lokuvula iwindow yokubhalisa. Kwikona ephezulu ngasekunene kukho iqhosha lokukhetha ulwimi. Ujongano liguqulelwa kwisiRashiya, isiNgesi, isiJamani, isiUkraine, isiPolish, isiFinnish, iSpanish, isiCzech, isiJapan, isiMalay, isiFrentshi, isiNorway, isiTurkey.
Isibhengezo solwazi sithatha indawo ebalulekileyo kwiphepha eliphambili. Nazi izithembiso zentengiso ezipapashiweyo, ulwazi olusisiseko malunga nomsebenzi wekhasino.
Ngaphantsi kwebhanna kukho amakhonkco kumacandelo aphambili ekhasino, kukho indawo yokuphembelela umdlalo ngoomatshini bokungcakaza kunye neminye imidlalo. Zonke iindawo zokubeka zinokuvavanywa kwimowudi yasimahla - akukho bhaliso luyafuneka.
Ezantsi kwewebhusayithi yekhasino ye-FastPay kukho imenyu yesalathiso, amakhonkco kumacandelo anolwazi olusemthethweni. Kunyanzelekile ukuba ufunde imigaqo kunye neemeko zomdlalo ngaphambi kokubhalisa.
Xa undwendwela indawo kwiselfowuni, ujongano luzilungelelanisa ngokuzenzekelayo nobungakanani bescreen. Oku kukuvumela ukuba udlale imidlalo oyithandayo yokungcakaza kwithebhulethi, i-smartphone ngokukhululeka okukhulu.
I-FastPay yekhasino ekwi-intanethi ibonelela ngenkxaso kubathengi abangama-24/7. Unokucela uncedo ngalo naliphi na ixesha losuku. Inkxaso yobuchwephesha inceda kubhaliso, ukuzaliswa kwakhona kweakhawunti, njl.
Ikhasino ibonelele ngeendlela zonxibelelwano:
incoko ekwi-intanethi- ebizwa ngeqhosha elihambelana nemenyu, ibekwe kwikona esezantsi ekunene kwesiza;
itikiti-unokwenza itikiti ngeqhosha"leNkxaso" kwimenyu ephezulu;
i-imeyile-kuya kufuneka uthumele isibheno kuphela kubafowunelwa aboniswe kwiwebhusayithi yekhasino.
Phambi kokuba uqhakamshelane nenkonzo yenkxaso, kuyacetyiswa ukuba uye kwicandelo le-FAQ. Sele zilungiselelwe iimpendulo kwimibuzo edumileyo.
Abakhenkethi besiza baqaphela imeko entle ye indawo esemthethweni kunye nendawo efanelekileyo yeebhloko zayo ezisebenzayo. Iibhanile eziqaqambileyo zithathelana indawo, zibonisa iindwendwe kunye namalungu abhalisiweyo e FastPay Casino iklabhu lonke ulwazi oluyimfuneko, kunye nokuvuselela umdla kwinto eyenzekayo ngaphakathi kweendonga zayo.
Iphepha eliphambili linamaqhosha obhaliso, amaqhosha okungena kunye neethebhu zemenyu. Isinxibelelanisi esidityanisiweyo senza ukuba kube lula nakwabaqalayo ukuhamba. Abangcakazi abavela kumazwe ahlukeneyo baya kuziva bekhululekile kumaphepha ayo, kuba ilungiselelwe inani elikhulu leelwimi ezahlukeneyo:
ISpanish, iSweden, isiNorway, isiFinnish, isiMalay, isiKazakh, isiTurkey, isiFrentshi, isiCzech, isiJapan kunye nezinye ezininzi azibalulekanga kangako.
Uhlobo lwe indawo esemthethweni ye-Fastray yahlulwe ngemibala eqaqambileyo, ke iyonwabisa. Ukunqongophala kolwazi olungafunekiyo kunye noyilo olumnandi likuvumela ukuba ubaleke ngokukhawuleza kwiingxaki zemihla ngemihla, ungene ngokungxama kwiindlela zokuzonwabisa zokungcakaza.
Ikhasino ibonelela ngeendlela ezininzi zokufaka kunye nokukhupha i-winnings. I-FastPay isebenza kuluhlu olubanzi lweemali, kubandakanya i-cryptocurrensets- EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, JPY, ZAR, USD, BTC, BCH, ETH, DOGE, LTC. Umthengi ngamnye omtsha kufuneka akhethe imali esisiseko yeakhawunti ngexesha lokubhalisa. Ukuba iidipozithi ezilandelayo zenziwe ngohlobo lwemali olwahlukileyo, emva koko kuya kwenziwa uguquko oluzenzekelayo.
Uninzi lweedipozithi ezikwi-FastPay zibalwa ngaphandle kwekhomishini, ngaphandle kweWebMoney wallet ye-elektroniki. Ngaphezulu kwe-80% yamatyala, imali ifakwa kwiakhawunti kwangoko- kwangoko emva kokuba umdlali ethe wakwazi ukubheja.
Iindlela zokuxhasa iakhawunti yakho:
amakhadi ebhanki-iVisa, iMaestro, iMastercard;
iivawutsha - EcoVaucher njlnjl.
Iyonke, yekhasino inika i-18 yokukhetha idiphozithi. Imida yokuzaliswa iyahluka ngokunyaniseka, ikuvumela ukuba udlale nokuba nohlahlo-lwabiwo mali oluncinci- i-10 yeedola, i-10 ye-eur, i-0.05 BCH, i-4400 DOGE, i-0.025 ETH, i-0.001 BTC, i-0.02 LTC, i-102 NOK, i-15 CAD, i-15 AUD, 16 NZD, PLN 45, JPY 1285, ZAR 175.
Uluhlu lweenkqubo zokuhlawula zokurhoxa ziyafana kukhetho lokufaka. Iintlawulo zenziwa ngaphakathi kweeyure eziyi-12-72, kuxhomekeke kwisixa kunye nenkqubo yokuhlawula. Owona mda mncinci wokurhoxa uphindwe kabini kunedipozithi.
Ukurhoxisa imali kwiakhawunti, kuyakufuneka uzalisekise yonke imiqathango yebhonasi (ukuba umdlali uthatha inxaxheba konyuselo), yiya kwinkqubo yokuqinisekisa.
, png"style=" ububanzi: 100%;"/>
Ikhathalogu yokungcakaza i-FastPay ibonelela ngaphezulu kwamawaka amabini emidlalo kuyo yonke incasa. Indawo inendawo zokubeka kunye neerali ezivela kubanikezeli abangaphezu kwama-30:
Amatic, iNetEnt, iFantasma;
I-PlaySon, Relax, Igrosoft, Microgaming, njl.
Ikhasino igxile kwimimandla emitsha-akukho ziindawo ze-retro ezinemizobo ephelelwe lixesha. Ikhathalogu iqulethe oomatshini ekufakwa 3 kunye 5 reels, 5 okanye ngaphezulu imigca pay. Isakhiwo ngasinye sinomxholo wawo, onikezelwe kuyilo, izinto zomdlalo, isandi.
Amacandelo"Thenga iNqaku" kunye"neBitcoin, i-ETH, i-LTC" ifanele ukuqwalaselwa ngokukodwa. Icandelo lokuqala liqulathe oomatshini ekufakwa apho ungathenga khona imijikelo yebhonasi, elesibini libonisa indawo yokubheja ngendlela yokubhala. Abanye boomatshini abakwi-FastPay baneejekhthi.
Ikhasino ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeeroulettes- zaseMelika, eNorway, ezenzekelayo, njalo njalo. Eli qela lemidlalo limelwe ngumboneleli ngendaleko. Umdlali unokukhetha itafile efanelekileyo esekwe kukhetho lomntu kunye nemida.
,"isitayile=" ububanzi: 100%;"/>
Inkqubo yebhonasi yekhasino imelwe zezi zinto zilandelayo:
Iibhonasi zabathengi abatsha. Bafakwe kwiidipozithi zokuqala nezesibini kwi-FastPay. Kwidiphozithi yokuqala, umdlali ufumana imali yebhonasi kunye nokujikeleza simahla, kowesibini- kuphela imali yebhonasi. Ixabiso elichanekileyo lebhonasi limiselwa bubungakanani bediphozithi. Elona xabiso liphezulu lebhonasi yokuqala yi-865 NOR, 100 USD/EUR, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44000 DOGE, 127 CAD, 130 AUD, 0.01 BTC, 1511 CAR, 0.25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN ... Ubungakanani besibini kukuphindeka kabini. Ungasebenzisa umnikelo wokwamkela kanye.
Inkqubo yokunyaniseka. Inamanqanaba - ukufezekisa nganye kufuneka uqokelele amanqaku ezimo. Zidlalwa ngokubheja koomatshini ekufakwa nakwezinye imidlalo. Inkqubo yokunyaniseka ichaphazela inani leebhonasi ezikhoyo. Ukufikelela kwinqanaba elitsha, umdlali ufumana i-15 ukuya kwi-500 yokujikeleza simahla.
Fastpay yiprojekthi enomdla ekufuneka iqwalaselwe ngabo bonke abalandeli bokungcakaza. Ikhasino inika yonke into oyifunayo ngexesha elinomdla, ukuntywiliselwa kwihlabathi lokungcakaza. Abadlali balindele ukuzonwabisa komgangatho ophezulu, ukuhlawulwa ngokukhawuleza, iwebhusayithi efanelekileyo, inani elikhulu leebhonasi kunye nenkqubo yokunyaniseka enenzuzo. Umbandela kuphela wokuba ngabantu abadala kuphela abanokubhalisa kule ndawo.